Nampatsiahivina moa fa maro ny voka-dratsy nateraky ny fitomboan’ny valanaretina ary tsy tamin’ny sehatry ny fahasalamana ihany fa hatramina sehatra hafa, izay saika nampikatso ny fampandrosoana sy ny fiainana andavanandron’ny Malagasy mihitsy. Nidera ny ezaka rehetra vitan’ny sampana mpandrindra ny ady amin’ny pesta ny praiminisitra, izay nahafahana nanome lanja ny fitarihan’ny governemanta sy ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka, ka nahatsapana ny fahombiazan’ny hetsika teny anivon’ny sehatra isan-tsokajiny. Nihatsara ny asa natao tamin’ny ady, izany dia tamin’ny alalan’ny fanomezana fanafody, kojakoja, ary ny fanofanana hanamafisana ny traikefa ho an’ireo tompon’andraikitra manokana eny ifotony, misahana izany. Nisy ihany koa ny fanatevenana ireo ekipa mandrindra eo anivon’ny Faritra ipariahan’ny valanaretina, ho fanohanana ny sampandraharahan’ny fahasalamana. Araka izany dia nampirisika ny governemanta ny praiminisitra mba hanamafy ny fomba fandrindrana sy hanatsara ny fiaraha-miasa maro lafy. Ilaina, hoy izy, ny fisokafana bebe kokoa amin’ny fiaraha-miasa akaiky hitazomana hatrany ny ady amin’ny valanaretina, ka voakasik’izany ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny, araka ny traikefa ananan’izy ireo eo amin’ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka, mba hahatongavana amin’ny fampandrosoana ankapobeny.